Somalia: Al-shabaab Oo Dishay Ku Dhawaad 100 Qof Laba Maalmood Gudahood, Farmaajo Oo Safaro Kaga Maqan Qaraxyada Muqdisho - Wargane News
Home Somali News Somalia: Al-shabaab Oo Dishay Ku Dhawaad 100 Qof Laba Maalmood Gudahood, Farmaajo...
Shalay Waxaa Dhacay Laba Qarax Halka Doraad-na La Weeraray Taliyaha Cusub ee Ciidanka Iyo Wasaaradda Gaashaandhiga
Ugu yaraan 10 askari oo u badan saraakiil ayaa ku geeriyootay qaraxyo ismiidaamin ah oo shalay Isniintii ka dhacay xero ciidan oo ku taalla Warshadii hore ee Nacnaca ee degmadda wadajir ee magaalladda Muqdisho.
Qaraxa ayaa waxaa fuliyay nin soo xidhay tuutaha ciidanka militariga dowladda Soomaaliya, waxaana la sheegay in uu gudaha u galay xerada ciidanka.
Dadkii ku dhaawacmay Qaraxa ayaa gaadhaya 15 ruux waxaana ku jirtay gabadh yar oo xerada meel u dhow joogtay xiligii qaraxa uu dhacaayay.
Qaraxa kale ayaa ka dhacay degmada Xamar Wayne waxaana lagu fuliyey gaadhi lagu soo xidhay waxyaabaha qarxa, kaasoo ku qarxay cusbitaala Martiini.
Labadii Qaraxa ee shalay ka dhacay magaalladda Muqdhisho ayaa kusoo aadayaa xili Axaddii ugu yaraan 15 ruux ay ku dhinteen qarax gaadhi loo adeegsaday oo ka dhacay meel u dhow wasaaradda Gaashaandhigga ee ku taalla magaalladda Muqdisho.
Qaraxa ayaa ahaa ismiidaamin waxaa uu dhacay xilli wada uu marayey taliyaha cusub ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliya Jeneraal Axmed Jimcaale Cirfiid oo xilka la wareegay.
Qaraxyadan joogtada ah ayaa imanaya kadib markii uu Madaxwaynaha Somalia ku dhawaaqay 60 maalmood oo dagaal ah oo ka dhan ah kooxda Al-shabaab, isagoo iminka dalka ka maqan ayaanay u muuqataa inuu helayo jawaabo la xidhiidha dhawaaqiisii ku aadanaa dagaalka Al-shabaab.